people Nepal » यी ४ ठूला नेता कहाँका मतदाता हुन् ? यी ४ ठूला नेता कहाँका मतदाता हुन् ? – people Nepal
यी ४ ठूला नेता कहाँका मतदाता हुन् ?
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मतदाता नामावली दमक नगरपालिका-१२, झापामा छ । एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको सूर्योदय नगरपालिका-९, इलाममा मतदाता नामावली छ । माधवकुमार नेपालले गौर नगरपालिका ३ बाट मतदान गर्नेछन् । नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईको मतदाता नामावली पालुङटार नगरपालिका १, गोरखामा छ।